War Deg Deg ah:Mid kamid ah wariyayaasha ugu Caansan Soomaaliya oo wax ku gaadheen weerarkii ismiidaminta ahaa ee Mogdisha ka dhacay | Salaan Media
War Deg Deg ah:Mid kamid ah wariyayaasha ugu Caansan Soomaaliya oo wax ku gaadheen weerarkii ismiidaminta ahaa ee Mogdisha ka dhacay
Sida uu noo sheegay mid kamid ah shaqaalaha Isbitaal Banaadir oo gaadhay goobta uu qaruxu ka dhacay daqqiiqado ka hor waxaa dhaawac soo gaadhay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Maxamed Ibaarim Macalimow oo marayay meel ku dhaw halka qarauxu uu ka dhacay.
Sarkaalkaan dhanka cafimaadka ah ayaa waxa uu shabakadaan u sheegay in Macalimow loona qaaday dhanka Isbitaal madiina isaga oo intaa raaciyay in darawalkii gaariga ku ka xeynayay uu soo gaaray dhaawac halis ah.
“Macalimow gaadhigiisa oo marayay agagaarka halka wax ka dheceen ayaa waxaa gaadhay bur bur xooggan isagiina gacanta ayaa wax ka gaareen. Jirkiisa waxba kama muuqdaan hasa yeeshee garabka ayaa wax ka gaareen Isbitaal Madiina ayaa loo qaaday. Darawalkiisa dhaawac halis ah ayaa kamuuqday”, sidaa uu sarkaalku sheegay.
Waxa uu inyaa ku daray in caruur fara badan oo marayay wadada hareeraheeda ay ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen qaraxa
Majirto wali cid shegatay masuuliyada weerarkaani waxa uuna imaanayaa xilli afhayeenka dagaalada ee kooxda Shabaab uu shaaciyay saacado kahor in ay kordhinayaan weerarada inta lagu guda jiro bishaan Barakeysan ee Ramadaan.